> Resource> Nyefee> Olee Wepụ Audio si MOV Files (QuickTime) na Windows / Mac
Mgbe edezi a video QuickTime MOV faịlụ, mgbe ụfọdụ i nwere mkpa iji wepụ ọdịyo egwu bundled na ya na ị nwere ike itinye a dị iche iche audio track. Ọ bụ ezie na a nso nke video edezi omume pụrụ inyere gị aka mezuo nke a, m na-eche Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) bụ uru na-agbalị. A mmemme cross-ikpo okwu nke mere na ọ pụrụ inyere gị aka wepụ audio kpam kpam site na mbụ MOV faịlụ na ala ma na Windows na Mac.
N'okpuru ebe a bụ zuru ezu nkuzi na esi wepụ audio si QuickTime MOV faịlụ na Windows (Widnows XP / Vista / 7/8 gụnyere). Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ a Mac, ị pụrụ ịmụta Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac) iji nweta otu ihe ahụ. Tupu ịlụ malitere, biko ibudata ma wụnye nri version maka gị sistemụ.
1 Mbubata isi iyi video faịlụ
Mgbe download na wetere a audio remover, họrọ n'etiti 16: 9 na 4: 3 kenyere udu. Wee pịa "Import" button ka ịgbakwunye isi iyi video faịlụ ka usoro ihe omume. I nwekwara ike ozugbo ịdọrọ na dobe gị MOV video faịlụ ka onye ọrụ album.
2 Wepu audio si QuickTime MOV faịlụ
Mgbe importing isi iyi video faịlụ, ebe ha ka ha na video usoro iheomume. Ugboro abụọ pịa lekwasịrị faịlụ ka a mata ya. Mgbe ahụ nri pịa ma họrọ "Audio ikwụpu" nhọrọ. Usoro ihe omume ga na-akpaghị aka ikewapụ ẹdude audio track site na mbụ video faịlụ. Ị ga-achọta iche audio track ga-apụta na Audio usoro iheomume. Wepụ ya, nri pịa ọdịyo track na-ahọrọ "Hichapụ".
NDỤMỌDỤ: Nke a video edezi ngwá ọrụ na-enyere gị aka mfe tinye gị onwe gị ụda track. Iji mee nke a, dị nnọọ mbubata audio faịlụ dị ka nzọụkwụ 1 na mgbe ahụ ịdọrọ na dobe ya ndị audio usoro iheomume. Ọ bụrụ na ndị audio mkpa edezi, abụọ pịa ya ka ịhazie olu, ọsọ, pitch ma ọ bụ tinye ichabo na / si utịp ke mmapụta elu window.
3 Export ma ọ bụ ịzọpụta ọhụrụ faịlụ
Pịa "Play" button na nri preview window ịhụ N'ihi. Ọ bụrụ na ị afọ ojuju, kụrụ "Mepụta" na ị na-aga mbupụ window. Dị ka ị na-ahụ, a usoro awade anọ mmepụta ụzọ. Ke "Format" taabụ, ị nwere ike ịzọpụta ọhụrụ na-arụ ọrụ niile ewu formats dị ka AVI, MP4, MOV, FLV na ọtụtụ ndị ọzọ. I nwekwara ike tọghata gị video ka a YouTube dakọtara usoro maka online iso na-"YouTube" taabụ ozugbo bulite ya. Ma ọ bụ ọkụ a DVD disk na nkeji na-ekiri ya na gị na n'ụlọ sinima.
Video Tutorial: Olee Wepụ Audio si MOV